Review Archives - Page7of7- Saturngod
Categorized as Review, Software Tagged burglish, myanmar
တကယ်လို့ သင်ရဲ့ Graphic Card ဟာ Game ကစားဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးဆိုတာကို တပ်ထားတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သင့်ရဲ့ ကဒ်ဟာ ShaderModel 2.0 ကို support လုပ်ပြီး 128 MB လောက်ရှိတယ်။ ဒါမှမဟုတ် 256 MB Express Card ကောင်းကောင်းတစ်ခု တပ်ထားတယ်။ ဒါဆိုရင် Graphic Card ကို Game ကစားဖို့တစ်ခုအတွက်ပဲ အသုံးချတော့မှာလား။ တခြား အံသြဘွယ် လှပဆန်းသစ်မှုတွေ ခံစားဖို့ မကြိုးစားတော့ဘူးလား။ Graphic Card ဆိုတာ Game ကစားဖို့အတွက်ပဲ အသုံးပြုတော့မှာလား။ လှပဆန်းသစ်မှုတွေ ခံစားချင်တယ်။ ရုပ်ရှင်လောကထဲကလို ကမ္ဘာထဲရောက်သွားစေချင်ရင်တော့ pictomio ဆိုတဲ့ Photo , Video Browser… Continue reading pictomio
Categorized as Review, Software Tagged windows
သိတာတော့ ကြာပြီ… ဒါပေမယ့် မသုံးဖြစ်ခဲ့ဘူး… download ချထားတဲ့ file က UHA နဲ့ဆိုတော့မှ စမ်းဖြစ်တော့တယ်… ကျွန်တော် winrar နဲ့ ယှဉ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်.. WinUHA က winrar ထက်ပိုပြီး ချုံ့နိုင်ပါတယ်… ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့
Categorized as Review Tagged windows
Nero Burngin 8 ကတော့ GUI design ကို စမ်းသစ်ထားတယ်ဆိုတာထက် အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး user friendly ဖြစ်အောင် လုပ်ထားတာပါ။ အလှအပထက် အသုံးပြုရလွယ်ကူရေးကို ဦးစားပေးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ smartstart ကို အဓိကပြောင်းလဲထားပါတယ်။ အရင်အဟောင်း nero burning rom ကတော့ပါရှိပေမယ့် ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူး။ smartstart ကတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး wizard တွေကို လျော့ချထားတယ်။ တနည်းအားဖြင့် user အနေနဲ့ မျက်စိရှုပ်စရာမဖြစ်ပဲ ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ သုံးလို့ရအောင် ပြောင်းလဲထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် mp3 အတွက် rip ကိုပါ ထည့်သွင်းထားပြီး home entertainment အတွက်ပါ ထည့်သွင်းထားတာကို တွေ့ရတယ်။ သဘောအကျဆုံးကတော့ smartstart ပါပဲ။… Continue reading Nero Burning 8
စမ်းကြည့်လိုက်တော့ တော်တော်လေး သဘောကျသွားတယ်.. မဆိုးဘူးဗျ… စမ်းကြည့်ပါလား.. burglish သမားတွေ အနေနဲ့ မြန်မာလို မရိုက်တတ်ဘူး.. ဒါပေမယ့် မြန်မာစာတော့ မပျောက်သင့်ဘူးလို့ ထင်တယ်.. burglish လိုရိုက်ပေမယ့် စာလုံးကတော့ မြန်မာစာလုံးပဲ ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်.. ကျွန်တော် စမ်းကြည့်တော့ တော်တော်လေးကို မိုက်တယ်.. တကယ်တော်တယ်ဗျာ… ရေးထားတာကတော့ AJAX တွေနဲ့ လန်ထွက်နေတာပဲ. မြန်လည်း မြန်တယ်နော်.. တော်တော်မိုက်တယ်.. သဘောတော့ တော်တော်ကျမိတယ်.. Web Text Editor မှာလည်း ထည့်သွင်းဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်.. http://burglish.googlepages.com/testarea.htm
Categorized as Review Tagged burglish, myanmar software